Madaxweynaha Jabuuti oo oday dhaqameed u noqon doona madaxda DFS, Muuse Biixi & Khilaafkii jiray oo uu dhamayn doono – Puntlandtimes
Madaxweynaha Jabuuti oo oday dhaqameed u noqon doona madaxda DFS, Muuse Biixi & Khilaafkii jiray oo uu dhamayn doono
NAIROBI(P-TIMES)- Wararka aan ka helayno dalka Jabuuti ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu maanta kusii jeedo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Wafti balaadhan oo ay qayb ka yihiin xildhibaano, wasiiro iyo waxgarad ayaa kamid ah xubnaha uu hoggaaminayo madaxweyne Geelle, kuwaas oo Muqdisho kaga qayb gali doona furitaanka kalfadhiga aqalka sare ee dalka.
Waa markii labaad ee Muqdisho uu booqan doono madaxweyne Geelle, waxaana hada socda soo dhaweynta iyo diyaar garowga loogu jiro imaanshihiisa madaxweynaha.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaa meelaha qaar lagu sharaxay sawirka madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle halka wadooyinka qaarkood maanta la xidhay.
Mr. Geelle ayaa inta uu ku sugan yahay Muqdisho kala dhex gali doona madaxda dowladda oo qaarkood khilaaf xoogani uu ka dhaxeeyo, waxaana uu heshiisiin doona gudoomiyaasha Baarlamaanada Aqalka sare iyo Hoose ee dalka Soomaaliya oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxayso iyo sidoo kale masuuliyiin kale.
Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare ayaa hore u sheegay in dib loo dhigay furitaanka kal fadhi ay yeelan lahaayeen golluhu sababo la xidhiidha imaanshaha madaxweyne Geelle oo kala dhex gali doona labada gudoomiye.
Madaxweyne Farmaajo ayuu kala hadli doona arimo ka dhex aloosan isaga iyo Muuse Biixi, waxaana kulamo ay yeelan doonaan diirada lagu saari doona wada hadalada dhex mari doona dowladda Soomaaliya iyo Somaliland.
Mooryaan Hutu Hawiye Futomadoobe bililiqo boob dhac kufsi dil mahaane wax kale ma yaqaaniin.